Ogaden News Agency (ONA) – TAALADA SAYID MAXAMED WAA BILOWGII JABKA GUMEYSIGA ITOOBIYA – Kooshin yare
TAALADA SAYID MAXAMED WAA BILOWGII JABKA GUMEYSIGA ITOOBIYA – Kooshin yare
Sida taariikh shucuubta caalamka laga bartay, libta iyo gacansaraynta kolba raas bay hadhsataaye cid dhaxal u heshay ma jirto. Sidaa quraankuna wuu caddeeyey “wa tilkal ayaamu nudaawuluhaa bayna naasi” waa aayad muslimiinta xikmad weyn bartay. Taariikhda gumaystayaasha iyo shucuubta caalamka ee kala xorowdayna waa marag cad oo nool oo horteena yaal ”haddaynu dhaayo leenahay”. Shalay oo aan fogayn dalweynaha Shiinaha ee ah dalka dunida ugu dad badan kana mid ah dalalka aduunka ugu dhulweyn, Jasiirada yaree Jabaanka uun baa gumaysanaysay, haddana waad aragtaan Jabaankii Maraykanow iga fujiyeey bay ku catowdaa. 192 dal ee Qaramada Midoobay QM xubnaha ka ah, sodomeeyo mooyee dhammaantood waa la gumaystay eeggana waa dalal xor ah oo Qaramada midoobay cod buuxa ku leh oo ku quluuliya dalkii gumaysan jiray.
Meel fog ha u doonin, Soomaali iyo Xabashi colaad facweyn baa ka dhaxaysa intii ay looltama-hayeen, laba jeer oo kala ahaa Qarnigii 15aad iyo kii 19aad xabashi waxay ku gacan saraysay, iyada oo kaalmo dad iyo duunya leh ka heshey reer Yurub, Sadex jeerna Soomaalibaa oo isku tashigeeda kaliya ka duulaysay ayaa libta ka maroorsatay.
Axmed-guray marbuu jabiyay, Sayid Maxamedna wuu jabiyay, dagaalkii Ogadenya ee 77-78 waa lagu jabshay eeggana qarkay u saarantahay in JWXO, ifefaalihii guusha Soomaaliyeed iyo Jabka Xabshina waan idiin ifinaya.
Waxaynu naqiinay in Xabashidu inkirto in dhul Soomali leedahay ku yaalo waxa ay iyadu ugu yeedho dalka Atoobiya. Markii birta la iska aslay 1977 waxay sagaashameeyadii qiratay in dhul Soomaali leedahay kamid yahay Atoobiya. Kolkaas oo lagu yidhi “Afkaaga ha ka yeedho”. Laguma kaaftoomin intaas dagaal gobanimodoon ah kii ugu adkaa ugu xanuun badnaa baa lala galay walina socda, kolkaas bay bilowday xukuumadda TPLF in TV-ga qudhun wade laga bafiyo war af Soomaali ah oo waayadii hore laga khashaafi jiray in idaacadaha Atoobiya laga siidaayo 2005. Dagaalo kulul kolkay dhaceen 2007kii wxaa la bilaabay in qolo afsoamli jajaban ku hadlay TV ga TPLF laga daawado oo heeso Soomaali ah laga siidaayo muddo badh saac ah. Waxay filayeen inlagu dago, laakiinse laguma qababoobin intaas ee waxaa sii holcay dagaalkii gobnimodoonka Ogadeniya, ka dib waxay bilowday kooxda TPLF inay TV Afsomali ah samaysato, oo la laaluusho idaacadaha Somalida iyo kuwa caalamiga ah ee Af-Somaliga ku hadlaba. Markuu gumaysigu arkay seefta afaysan ee suuugaanta gobanimodoonka ah iyo dagaalka dhanka ah ee lagula jiro gumaystada TPLF ayaya iyana waxay ku dhaqaaqday inTV-ga af-somaliga beenta laga baafin jiray ay ka qaado dhaanto iyo heeso Soomaali, loo yeedho fanaaniinta Soomaalida ee dalalka dibada iyo G/Afrikaba ku kala sugan oo lacag qaado oo Jigjig maruun tag la yidhaahdo.
Waxaan soo gaadhnay oo shalay ahayd iyada oo qofkii Ogadeniya gudaheeda Afsomali ku hadla la yidhaahdo ma Xamar baad ka timid mise Hargaysa. Eegana waa taa Idaacadhooda iyadoon aayad iyo bisin qudh ah lagu furin ay dhaanto ku fura hayan, ogaadaana dhaantada waxaa nooleeyey gobanimodoonka.
Fircoonkii Meles Zinawi ahaa ayaa 2008 ku dhaqwaaqay isaga oo leh Qabiilka Ogadenka ah waa dad wanaagsan, oo daga Geeska Afrika, Sayid Maxamed na Halyay buu ahaa aan Afrika ku jirin isaga oo kale, hall ama HOOSO laga dhisayo Jigjigna ha loogu magacdaro. Rasaasta gobnimodoonka un baa la hayn la’aa innaba wax kalgacal Meles Zanawi uma uu san qabin Sayid Maxamad Cabdille Xassan. Inaga oo ogsoon dhibaatada uu dhiigyacabkii Meles dhibaatada uu shacabka Somalida Ogadenya u gaystay ee warbixintii UN-ku sanadkaa 2008 laga soo saray Ogadenia laga yaabay iyo warbixintii HRW ay soo bandhigtay.
Waxaas oo dhan waxay astaamo cadcad u yihiin jabkii Atoobiyadii in kiri jirtay in cid aan Xabashi ahayni jirto Gees Afrikaba. Sadexdii sano ee u dambaysay Gumaysatada TPLF waxay bilowday inay ku hadaadqdo magaca ismaamulka Ogadeniya ma u bixinaa bal inay xabada gobanimodoonku qabawdo. Qoraa sadex gu’ ka hor maqaal qoray ayaa yidhi; “Meles Zinaawigii madaxda kililadu arki waayi jireen wuxuu guddoomiye u yahay guddiga soo dhaweynta qurba joogta Ogadeniya”. Wecel-wecel dhalay – “kolkii la toley bay olashay”.
Gumaystuhu wuu inkiraa ummadda uu gumaysto, kadibana markay dagaalanto ayuu yasaa inay dagaalami karaan, kadibna markuu xanuunsado ayuu gumaadaa, kadibna markuu daalo ayuu aqbalaa inuu gumayste ahaa lagana adkaaday. Sidaa waxaa maray dhammaan gumayteyaashii dunida soo maray. Tan uu hadda Wayaanuhu horboodayaana wadadaas umbay haysaa oo dhab ah.
Arintan qosolka leh ee jigjiga iyo TPLF dhextaagan waxay ina xusuusin sheeko Soomaali aanan aqoon xaqiiqdeeda. Nin caamo ah oo aan diinta aqoon u lahayn yaa sheikh soo martiyay dabadeed wuxuu ka codsaday inuu hooyadii iyo aabihii quraamo. Nin wuxuu la yaabay sheekha cilmigiisii, hadaba wuxuu ku yidhi sheekhow ha iga tagin, sheekhiina waa diiday arintaas. Kadib wuxuu ninkii go,aan ku gadhay inuu sheekha dilo oo gurigiisa ku dhex aaso si maalin walba uga barakaysto ileen waa awliyo sheekhuye. Sheekhii cagaha ayuu wax ka dayay isaga oo argagaxsan, ninkiina bilaawuu la daba orday, kolkaas buu kitaabkii tuuray, oo masalahii tuuray, oo cimamadii tuuray. Ninkiina kama hadhina cagtuu cagta u saaray isaga oo leh “wallee saala saalaysaye sidaas baana kaaga hadhin”. Taas oo kale ayaa maanta Jigjiga ka taagan iyo Ardisababa. Ama Sayid Maxamed taalo ha u sameeyaan ama dhaanto ha ku waashaane waranka gobanimodoonku ka joogsan maayo.
Dajidu miyay Caano Noqon, Danood ma Amxaar dagaa Jira, Deegaanka anaa ku noolaa ilaa duud nabi Sulaymaan, Dad yahaw Xabashidu gardaranaa, Abwaan Kaadheeribaa yidhi tobon sano ka hor.
Gabagabdii iyo gunaanadkii lugooyadii gumayteyaasha ku dhici jirtay un ba Itoobiyana haysata. Cimrigeedii TPLF iyo Ardisaba wuu go’ay waxaana cadyn kuu ah Taalada Sayidka, waa tartaarsigii ugu dambeeyey ee Adoonsigii Atoobiya. Guushana sida Alle looga bartay Sayid Maxamed iyo dadkiisiibaa yeelan.
kah … kah .. kah !!!!
Wecel-wecel dhalay – “kolkii la toley bay olashay”.
Thank you Kooshin Yare
Sayidku wuxuu qoriga u qaaday xoreynta dadkiisa iyo dalkiisa sidaasuuna ku shahiiday (RA) ee ninkii jecel Sayidka ha nooleeyo siiradiisii oo ah xornimo iyo cizi ku noolaansho, quudhsi iyo gumaysi diid.
Waa bah-dil horle oo dhaqanka umadda Somaliyeed iyo Taariihkdeeda lagu doonayo in lagu dhalan-rogo. Laakiin Waxaa Hubaal ah inaanay suuroobayn marna taasi.
ogadenia guul iyo gobanimo wadanku wuxoroopidonaa hadii uu alle idmo in shaa allah dhamaan shacabka ogadenia waxaan u sheegayaa xabada iyo geerido waa ay huruantahay meel kastoon jogno